Ciidamada gumaysiga Itoobiya oo dhibaatooyin dil iyo xadhig isugu jira u gaystay dadwayne rayad ah.
Dugsi ku yaal magaalada Ambo oo la qarxiyay.
Mudaharaad aad u ballaadhan oo ka dhici doona magaalada Washington.
Itoobiya oo looga baqayo inuu dagaal sokeeye ka qarxo.
Ciidamada Itoobiya oo gubay dugsi Quraan oo ku yaalay magalada Luuq.
Waraysi kooban oo aanu la yeelanay afhayeenka jabhada wadaniga xoreeynta Ogaadeenya.
Barnaamujkii halgan iyo halgame oonu ku soo qaadan doono carbinta dabaqoodhiga iyo suugaan halgameed.
Ciidamada gumaysiga Itoobiya oo dhaqan ka dhigtay cadaadiska iyo xadgudubyada kala duwan ee dadwaynaha rayadka ah loo gaysto, ayaa muddooyinkii u denbeeyay dhibaatooyin kala duwan u gaystay dadwayne rayad ah ee ku kala nool meelo kala duwan oo Ogadenya ka mid ah, waxayna ukala dhaceen xadgudubyadaasi sidatan:
20/3/04, Gal-camuudle, oo ka tirsan deegaanka Galaalshe, waxay ciidammada gumaysigu ku dileen, Haweeney, mid kalena way ku dhaawaceen. Iyadoo weli aynan nasoo gaadhin magacyada dumarkaas. Sidoo kale waxay isla degaankaas ka kaxaysteen 7 nin oon la garanaynin meel ay geeyeen.
30/3/04, Dhagaxbuur waxay ciidamada wayaanuha ee Itoobiya ku faraxumeeyeen wiil yar, ka dibna ay dileen.
2/4/04, Alqata, oo ka tirsan degaanka Baabili, waxay ciidamada gumaysigu ku dileen 4 nin oo shacab ah oon hubaysnayn degaankaasna ku noolaa.
3/4/04, Booraale waxay ciidamada wayaanuhu ku dileen, 2 nin oo shacab ah oon aan wax dhibaato ah gaysan.
7/4/04, Gol-habreed, oo degaanka Dhuxun ka tirsan, waxay wayaanuhu ku dileen nin lagu magacaabo: Maxamed Xussein Jaamac (indhayare). Waxay isla goobtaas ku dileen haweyney uur leh oo iyadana lagu magacaabo: Faadumo Carab Shaafi, waxay kaloo halkaas ku dhaawaceen wiil yar oo hal sano jira oo magaciisa la yidhahdo: Axmed Maxamed Cabdulaahi. Iyagoo weliba Ciidammada Wayaanuhu boobeen reerkii ay dadka ka laayeen, waxayna ka qaateen 500 bir oo caddaan ah iyo hanti kale oo badan. Waxay sidoo kale halkaas ku fara xumeeyeen dhaawacyana ay ugu gaysteen laba gabdhood oo la kala yidhaahdo: Xafsa Takhal Xussein iyo Asiili Axmed Aaden. Waxay kaloo kaxaysteen dad badan oon weli magacyadooda la haynin.
Ciidammada Wayaanuha ee Itoobiya waxay sidoo kale meelo kala duwan oo Ogadenya ka mid ah ku xidh xidheen dad fara badan:
Caasimada Ogadenya ee Godey waxay ku xidheen dadka kala ah:
1- Maxamed Qabaan Dhicis.
2- Inshaar Qabaan Dhicis.
3- Miyir Buraale Xusseen.
4- Maxamed Cabdi weyrax.
5- Budul Maxamuud Faarax.
6- Suldaan Negeyle Cumar.
7- Wacdi Miyir Xusseen.
8- Mukhtaar Maxamuud Faarax.
9- Xaliimo Aaden Cabdi-waaxid.
10- Ayaan Carab Weli
Labada nin ee magacyadoodu ay dadka ugu horreeyaan waxaa kiiba lagu ganaaxay inuu bil kasta bixiyo lacag 500 oo bir ah, iyagoo lagu eedeeyay in ay Jabhadda xidhiidh la leeyihiin.
Magaalada Iimey waxay ku xidheen ciidamada Itoobiya dad laga soo kala qabtay meelo kala duwan, waxaan dadkaas ka mid ah:
1- Faseex Cataab Colaad, oo aad loo jidhdilay.
2- Bishaaro Xusseen Food.
3- Sahra Maxamed Qasse, oo aad loo jidhdilay, ritina laga qashay.
4- Sahra Ebyan Axmed, oo laga soo qabtay Jiiqda.
Dadkaas qaarna la laayay qaanra xabsiyada loo taxaabay, ayay ciidamada Itoobiya ku eedeeyeen in ay taageero u hayaan ciidamada wadaniga xoreeynta ogaadeenya, hasa yeeshee dad aanu kala xidhiidhnay deegaanada dadkaas lagu wax yeeleyay ayaa noo xaqiijiyay inaysan dadkaasi wax siyaasad ah lug ku lahayn oo ay ahaayeen dhamaantood dad shacab ah oo xoolo dhaqato , ganacsato iyo dad iskood u shaqayta isugu jira.
Dugsi magaalada Ambo ku yaal oo la qarxiyay.
Wariyaha Wakaaladda Wararka Ogadeniya u jooga magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in la qarxiyay dugsi ku yaalla magaalada Ambo, oo ku taalla galbeedka Oromiya jimcihii la soo dhaafay, halkaas oo ay ku dhaawacmeen 18 arday, oo 12 ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay.
Warku wuxuu intaa ku daray in qaraxani ka dhacay dugsiga sare ee Ambo wakhti ay ardaydu isu baddalaysay fasallada oo ay aad u badanaayeen, walina lama helin ciddii qaraxaas ka denbaysay. Dhaawaca ardaydii ay halkaasi wax yeelada ka soo gaadhay ayaa waxa lagu daawaynayaa cisbitaal ku yaala magaalada Ambo.
In kastoo ay xukuumadda Addis Ababa sheegtay inay qaraxaas wax yar ka hor nawaaxiga dugsiga ka qaqabatay xubno ka tirsan ururka Oromada ee OLF, haddana waxay warar aanu ka helay ilo xog-ogaal ahi sheegayaan in ciidamada nabadsugida ee Itoobiya ay qaraxaas ka danbeeyeen, iyagoo kaga aargoosanayaan kacdoonkii beryahanba ardayda Oromadu ka samaynayeen meelo kala duwan oo Itoobiya ka mid ah.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Washington ayaa sheegaya inay qabanqaabinayaan ururro mucaarad ah oo xukuumadda Itoobiya ka soo horjeeda mudaharaad aad u ballaadhan oo ka dhici doona magaalada Washington bishan Abriil 23-keeda.
Mudaaharadkan ayaa waxa lagaga soo horjeedaa falalka xun-xun ee bani�adamnimada ka baxsan ee taliska Addis Ababa kula dhaqmayo dadyawga ay Itoobiya gumaysato, kuwaasoo isugu jira dil, kufsi, jidhdil, xidhay aan sharci ahayn, dadka oo la waayo iyo guryaha iyo beeraha oo la gubo iyo weliba iyadoo guryohooda laga qixiyo kumayaal qof oo aan waxba galabsanin.
Falalkaas foosha xun ayaa keenay inay xasillooni darro aad u wayni saamayso dhammaanba gobollada kala duwan ee Itoobiya, isla markaana wadnaha farta lagaga hayo inay dagaallo sokeeye ka dhex billowdaan dadyowga Itoobiyaanka isku sheega.
Itoobiya oo dagaal sokeeye looga baqayo.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya inuu ururka macalimiinta ee Itoobiya ku baaqay in xal degdeg ah loo helo khilaafka sii ballaadhanaya ee u dhexeeya ardayda Oromoda iyo xukuumada Addis Ababa, kaasoo haddii aysan dawladu xal u helin, oo ayna iska daynin wadada ay u sii jeexayso keeni kara inay dagaallo sokeeye ka billaabmaan Itoobiya.
Warku wuxuu kaloo intaa raaciyay inay xidhan yihiin in ka badan 7000 oo arday iyo macalimiin isugu jira oo ay dhalashadoodu tahay qoomiyada Oromoda.
iyadoo gadoodka ay ardaydu kaga soo hor jeedaan gumaysiga Itoobiya uu keenay khasaare laxaad leh oo mood iyo noolba leh.
Dawlada Itoobiya ayaa lambarka koowaad gashay dalalka Afrika ugu badan dagaalka ka socda gudaha dalka, iyadoo ay ugu wacan tahay dal-ballaadhsigii ay Itoobiya ku qabsatay wadammadii deriska la ahaa, kaasoo keenay in qowmiyado badan oo ay gumaysato ay dagaal ba�an kala soo hor-jeedsadaan.
Dagaalka gobanimo doonka ah ee ay JWXO kula jirto gumaysiga Itoobiya ayaa noqday dagaalka ugu ba,an ee itoobiya lagala soo horjeedo.
Ciidamada Itoobiya oo gubay dugsi Quraan ku yaalay magalada Luuq.
war uu qoray wargayska Muqdishotimes ayaa sheegaya ciidamo Itoobiyaan ah, oo ku hubeysan Gawaarida Gaashaaman oo si ka dis ah ku soo galay magaalada Luuq .
Ciidamdaas ayaa si toos ah u beegsaday Dugsi Qur-aan oo ku yaalay Magaalada Luuq, waxayna kala direen ardaydii halkaas wax ku baranayay, kadibna dab ayay qabad siiyeen Dugsigii iyo waxii qalab yiilayba. Dugsigan ayay wax ka baranaayeen ardayda Qur-aanka iyo Xer Cilmi doon ah oo ka yimid Gobolada soomaliya.
Wararka Luuq ka imaanaya ayaa sheegaya in gubashada Dugsigaas Qur�aanka si aad ah looga hadal hayo magaalada Luuq inkastoo markii ay ciidamada Itoobiya isaga baxeen Luuq la dareemay dabka baaxadiisa.
Afeef: aragtida warkan waxaa leh radio Xorriyo...